Miiljalee ykn Ibsa Dabalataa Gulaaluu fi Saaguu
Miiljaleen odeeffannoo dabalata matadureewwan fuulaa gadii jiran wabii kenna fi ibsi dabalataa odeeffannoo dhumaa galmeekee irra jiran wabii kenna. LibreOffice'n ofumaaan miiljalee fi ibsa dabalataaf lakkoofsa kenna.
Miiljalee ykn ibsa dabalataa saaguuf
Galmeekee keessa iddoo itti korkoddii yadannoo kaa'uu barbaaddu cuqaasi.
Choose Saagi - Miiljalee/Ibsadabalataa.
Naannoo Lakkaawwii keessaa, dhangii fayyadamuu barbaadde filadhu. Yoo Arfii filatte, qabduu sakatta'ii cuqaasi (...) fi arfii miiljaleef fayyadamuu barbaadde filadhu.
Naannoo Akaakuu keessaa, filadhu Miiljalee ykn Ibsadabalataa.
Akkasumaas saajooMiiljalee Kallattiin Saaguu kan kamshaala Saagi irra jiruu cuqaasuun miiljalee saaguu dandeessa.
Miiljalee ykn ibsa dabalataa Gulaaluu
Yommuu galmeekee keessatti korkoddii miiljalee fi ibsa dabalataa lamqiqqindessitu akeektuun hantuutee gara harkaatti jijjiramti.
miiljalee ykn ibsa dabalataa Gulaaluuf,yadannoo keessa cuqaasi, ykn korkoddii yadannoof barruu keessa cuqaasi.
Barruucha keessaa, barruu miiljalee ykn ibsa dabalataa irraa gara korkoddii yadannootti utaaluuf, dhiibi.
Amaloota lakkaawwii korkooddii miiljalee ykn ibsa dabalataa gulaaluuf, fuldura korkoodditti cuqaasii, Gulaaluu - Miiljalee/Ibsadabalataa fili.
Dhangiiwwan warra LibreOfficen miiljaleewwan fi ibsoota dabalataatiif fayyadamu jijjiiruuf, Meeshaalee - Miljaleewwan/Ibsadabalataa filadhu.
Miiljaleewwan fi ibsoota dabalataatiif amaloota bal'ina barruu gulaaluudhaaf, Dhandi'i - Fuula filadhu, kana booda caancala Miiljalee cuqaasi.
Miiljaalee haquuf, korkooddii miiljalee barruu keessaa haqi.
Miiljaloota Addaan Fageessuu
Title is: Miiljalee ykn Ibsa Dabalataa Gulaaluu fi Saaguu